Wakiilka Matthijs de Ligt oo xiriir la sameeyay kooxo ka dhisan England iyo Spain si uu xagaaga dambe uga dhaqaajiyo Juventus – Gool FM
(Turin) 18 Okt 2021. Wakiilka xiddiga difaaca ugu ciyaara Juventus ee Matthijs de Ligt ayaa lagu soo warramayaa inuu xiriirro la sameeyay kooxaha Chelsea, Manchester City iyo Barcelona si uu xilli ciyaareedka xiddigan uga dhaqaajiyo kooxda Taliyaaniga ka dhisan.
Inkastoo aysan jirin dhibaato u dhexeysa Juve iyo difaaceeda, haddana wakiilkiisa Mino Raiola ayaa doonaya inuu xiddigan u kexeeyo kooxo kale xagaaga soo aaddan isagoo durba wada-hadallo horudhac ah la billaabay dhowr naadi oo ka dhisan qaaradda Yurub.
Sida laga soo xigtay wargeyska Taliyaaniga kasoo baxa Calciomercato, Raiola ayaa ku cago-jugleeyay inuu 22-sano jirka reer Netherlands ka kaxeyn doono Juventus dhammaadka xilli ciyaareedkan si uu beeciisa kaga helayo gunnooyinka uu howsha ku dhammeeyo.
Si kastaba ha ahaatee, De Ligt ayaa ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan Bianconeri isagoo xagaagii 2019 uga soo biiray naadiga Ajax markaas oo kooxda ka dhisan dalkiisa ay dhaafsatay 63 milyan oo gini.
Horudhac: Arsenal vs Crystal Palace... (Muxuu yahay Gunners iyo rikoorkeeda Premier League ee kulammada habeenka Isniinta?)